Ikhosi ye-AutoCAD-funda ngokulula-iGeofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ikhosi ye-AutoCAD-funda ngokulula
Le yikhosi eyilelwe ukufunda i-AutoCAD ukusuka ekuqaleni. I-AutoCAD yeyona software idumileyo yoyilo oluncediswa yikhompyuter. Liqonga elisisiseko leendawo ezinje ngobunjineli bobugcisa, uyilo, uyilo loomatshini kunye nokulinganisa. Yisoftware efanelekileyo ukuqala, ukwazi imigaqo-nkqubo yoyilo kwaye uyisebenzise kwisoftware ekhethekileyo kumacandelo athe nkqo anje ngeRevit (Architecture, 3D Max), Revit MEP (Electromechanical / Plumbing), Civil Engineering (Ulwakhiwo, Advance Steel, Robot) , Ubume bendawo kunye nemisebenzi yoluntu (3D yaseburhulumenteni).
Kubandakanya inkcazo yenyathelo ngenyathelo yemiyalelo ephambili apho i-90% yoyilo yakhiwe kwi-AutoCAD.
Isiseko se-AutoCAD 3D
Inyathelo nenyathelo ngemiyalelo ephambili
Le yindlela abasebenzisi abakala ngayo ikhosi yethu kwii-CourseMarks.
Iikhosi-zooRhulumente baseKhaya Izifundo ze-AutoCAD
Ikhosi yePython-Funda kwiNkqubo